Kamboty teny Tsimialonjafy: Tonga ireo fitaovana hiatrehan’i Angelo ny taom-pianarany
lundi, 04 février 2019 13:54
Sary : Kravaty Manga
Fampanantenan’ny Filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ny handray an-tanana manontolo ny fianaran'i Angelo mandrapahazoany ny diplaoma Bakalorea. Natolotry ny iraka nalefany izay notarihin'ny Sekretera Jeneraly Nasionalin’ny antoko HVM Mohamed Haloa Rachidy androany maraina ny fitaovam-pianarana ho an'i Angelo. Nomena solosaina sy vatsy ara-bola ihany koa ity farany hiatrehany ity taom-pianarana ity.
Anisan'ireo niharam-boina nandritra ny loza vokatry ny fianjeran’ny vato be teny Tsimialonjafy, Antananarivo faha-IV ny harivan’ny 19 janoary 2019 i Angelo. Namoy ny ainy tamin'izany ny ray aman-dreniny sy ny anabaviny ary ny zanak’anabaviny.
"Izaho irery sisa, ary mahatsiaro tena ho irery sy banga tanteraka aho. Tsy misy azo raisina intsony ny fitaovana entiko mianatra", hoy izy.
Tamin’ny 25 janoary 2019 no nahitan’ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina azy raha nitsidika sy nitondra fanampiana ho an’ireo traboina nitoby ao amin’ny INFP Mahamasina ny tenany. Tamin’izay no nilazan’ny filoha teo aloha fa « handray an-tanana ny fianarany manontolo mandrapahafany ny fanadinana bakalorea » ary koa « hiahy sy hanampy » an’i Angelo « araka izay azoko atao ».